Wafti sare oo ka socda Jabhadda ONLF ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee Itoobiya | SAHAN ONLINE
Wafti sare oo ka socda Jabhadda ONLF ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee Itoobiya
ADDIS ABABA – Waxaa gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya xubno sare oo ka socda Jabhadda ONLF ee dagaalka kula jirtay dowladda Itoobiya.
Wafdigan sare ayaa waxaa hoggaaminayay Afhayeenka Jabhadda ONLF Cadaani Cabdiqaadir ,waxayna ka kooban yihiin 3 xubnood oo sare.
Wasiir dowlaha Xafiiska Arrimaha Isgaarsiinta dowladda Itoobiya Kaasaahun Gofe ayaa wafdigan kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Bole.
Afhayeenka Jabhadda ONLF Cadaani Cabdiqaadir oo ka waramay safarkooda ayaa sheegay iney kaga jawaabayeen baaqa uu soo jeediyay Ra’iisal Wasaare Dr Abiy Axmed.
Sidoo kale ay u yimaadeen sidii wax looga qaban lahaa xaalada deegaanka Soomaalida.
Cadaani ayaa sheegay iney Jabhaddu si iskeed ah u gaartay xabad joojin maadaama ay dooneyso iney gobolka xabbad dambe ka dhicin oo deegaanka Soomaalida xal waara looga gaara.
Afhayeenka ayaa xusay in dowladda Itoobiya ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo wax looga qabanayo dhibaatooyinma xuquuqda aadanaha Jabhadda ONLFna ay tixgelisay tallaabada socota sidaasna ay dalka u yimaadeen.